Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qeyb galaya shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay – Somali Top News
Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qeyb galaya shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
September 22, 2019 Somali Top News	0 Comments Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qeyb galaya shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Axada maanta ah u ambabaxay Maraykanka, si ay uga qeyb galaan mareetada 74-aad Golaha Guud ee Qaramada Midoobey.
Shirkan ayaa lagu sumaday “Dib-u- xoojinta dadaallada wada-jirka ah ee lagu dabar gooynayo saboolnimada, baahinta waxbrasho tayo leh iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbaddelka cimilada”.
“Wafdiga ayaa kulammo doceedyo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga la qaadan doona dhiggooda dalalka Caalamka ee ka soo qeyb galaya shirweynaha Golaha Guud ee UN-ka,” ayuu yiri xafiiska Farmaajo.
Farmaajo ayaa dhowaan dib isaga celiyay Baasaboorka Mareykanka, kaasi oo la aaminsan yahay in uu kamid ahaa sababihii ka hortaagnaa in uu ka qeybgalo labadii kulan ee ugu dambeysay ee fadhiga guud ee Jamciyada Qurumaha Ka Dhaxeysa.
Ra’iisul Wasaarihiisa, Xasan Cali Khayre, ayaa dalka ku metalay labadii sano ee u dambeysay, wuxuuna ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay xaaladda dalka, dagaalka AlShabaab iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
← Al-Shabaab militants storm Somali military base, soldiers dead
Somali Federal Government releases $6m of EU aid to regional governments →
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulah kuleh magaalada Muqdisho
Wasiirkii Wsaaradda Awqaafta Iyo Arimaha Diinta Oo Xilka Laga Qaaday
Howlgallo ka socda magaalada Baladweyne